Ciidamada amaanka shabeelaha hoose oo rajo xumo ka muujiyey awooda Al-shabaab ee gobolka – Radio Daljir
Oktoobar 10, 2013 3:26 b 0
Marka, October 10, 2013 – Maamulka dowladda federaalka ah ee gobolka shabeelaha hoose ayaa rajo xumo ka muujiyey weerarada soo noq noqda ee ururka Al-shabaab ay ka fulinayaan qaybo ka mid ah gobolka oo ay ku xoogan yihiin.
Hay?adaha amaanka gobolka shabeelaha hoose ayaa sheegay in ururku ay joogaan deegaano ka tirsan gobolka.
Taliyaha qaybta booliska gobolka shabeelaha hoose Cabdi Ibraahim Shaamow oo la hadlay saxaafada ayaa sheegay in ururka Al-shabaab ay weerar ka soo qaadaan deegaan ku dhow Shalaamabood, waxaa uu sheegay in ay halkaas ku xoogan yihiin ururku.
?Al-shabaab weli waa ku xoogan yihiin gobolka, taasna waxay rabtaa in wax laga qabto.? Ayuu yiri Cali Shaamow waxaa uu intaas ku daray ?Shalaamabood meel ku dhow ayay had iyo goor weeraro ka soo qaadaan.?
Degmooyinka Jannaale, Shalaamabood iyo Marka ayaa habeen hore waxaa ka dhacay weeraro noocyo kala duwan ah, markii ay ururku dhowr bam gacmeed ku tuureen saldhiga Marka, sidoo kalena weerar madaafiic ah ku qaadeen xaruumaha ciidamada ee Jannaale iyo Shalaamabood.